Jirama: efa lo | mandimby maharo
Jirama: efa lo	Posted on 3 September 2012 by Mandimby Maharo	In’4 tapaka izay ny fantsona mitondra ny rano aty aminay tao anatin’ny 2 volana. Ireny fantsona lehibe mamatsy rano ireny no simba ka trano maro no sahirana. Rehafa antsoina moa ny Jirma mba hanamboatra izany dia milaza izy ireo fa tsy mbola misy ny kojakoja anamboarana izany.
Ny mahagaga nefa dia raha nisy ny filazana fa ho raisin’ny kaominina an-tanana ny famantsian-drano eto andrenivohitra dia nahavita nitokona sy nitabataba ny tao amin’ny Jirama. Izay ve izany ilay atao hoe “aleo lo toy izay omen-kavana”? Mety tsy ho vita’ny kaominina tokoa aloha ny hisahana ny famatsiandrano eto, saingy toa tsy vita’ny Jirama koa nefa izany.
Raha ny fanazavana nomen’ireo teknisiana mpanamboatra ireny fantsona simba ireny dia tsy vita’ny famonjena “rano vaky” fotsiny intsony ny tambazotra eto Antananarivo fa mila fanoloana tanteraka mihintsy. Ny fanontaniana ary dia ny hoe ahoana ny fomba anaovana isany fanoloana tanteraka izany? Fa raha izao aloha no mitohy dia tsy ho ela dia hitovy amin’ny any atsimo ny eto.
Tags: Antananarivo, jiramaCategories: societé